Heshiisyadii La Dhamaystiray Maanta Iyo Caawa, Kuwa Qarka Loo Saaran Yahay Iyo Wararkii U Dambeeyey Caawa - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaHeshiisyadii La Dhamaystiray Maanta Iyo Caawa, Kuwa Qarka Loo Saaran Yahay Iyo Wararkii U Dambeeyey Caawa
Heshiisyadii La Dhamaystiray Maanta Iyo Caawa, Kuwa Qarka Loo Saaran Yahay Iyo Wararkii U Dambeeyey Caawa
Dhaqdhaqaaq badan ayaa ka jiray suuqa iibka ciyaartoyda maanta oo Jimce ahayd, waxaana jiray saxeexyo la dhamaystiray, kuwo si xor dhac ah loo gaadhay iyo warar kale oo xaasaasi ahaa.
Qodobbadii ugu waaweynaa suuqa iibka ciyaartoyda maanta ayaanu isha soo marinay, waana kuwan e akhris wanaagsan:
RASMI: Xiddigii Manchester City ee Jack Harrison ayaa si rasmi ah ugu biiray Leeds United oo uu xilli ciyaareedkii hore amaah kula joogay. Harrison ayaa saxeexay heshiis saddex sannadood ah, lamana sheegin lacagta ay Leeds kagala soo wareegtay Man City.
RASMI: Weeraryahanka reer Portugal ee Andre Silva ayaa ka tegay Eintracht Frankfurt, waxaanu si rasmi ah ugu wareegay kooxda kale ee reer Germany ee RB Leipzig oo ku iibsatay lacag gaadhaysa 23 milyan oo Euro.
RASMI: Victor Moses ayaa si rasmi ah uga tegay Chelsea oo uu sagaalkii sannadood ee u dambeeyey ka tirsanaa, isla markaana lix jeer amaah ku dirtay. Laacibkan ayaa si rasmi ah ugu wareegay Spartak Moscow oo uu u saxeexay heshiis laba sannadood ah.
RASMI: Manchester United ayaa heshiis cusub oo sannad ah ka saxeexday goolhayaheeda Lee Grant oo kordhiyey qandaraaskiisa Old Trafford.
RASMI: Southampton waxay heshiis afar sannadood ah la gaadhay difaaca lagu magacaabo Romain Perraud oo ay kala soo wareegtay naadiga Stade Brest. Saints ayaa si rasmi ah usoo bandhigtay laacibkan oo saxeexaya qandaraaska uu kooxdan kaga mid noqonayo.
RASMI: Leicester City ayaa heshiis rasmi ah oo shan sannadood ah la saxeexatay difaaca kooxda Lille ee Boubakary Soumare. Foxes ayaa bixinaysa lacag dhan £17 milyan oo Gini oo ay u shubayso Lille.
RASMI: West Brom waxay lasoo saxeexatay laacibka lagu magacaabo Alex Mowatt oo ay kasoo qaadatay Barnsley, waxaanu qalinka ku duugay heshiis saddex sannadood ah. Mowatt ayaa si xor ah ugu yimid West Brom.
RASMI: Manchester United waxay heshiis heshiis la gaadhay goolhayaha ruug-caddaaga ah ee TOm Heaton oo saxeexay qandaraas soconaya illaa 2023. Waxa ku jira heshiiska qodob dhigaya in sannad kale ay United ku kordhin karto heshiiska haddii ay go’aansato.
RASMI: Xiddiga da’da yar ee Chelsea ee Billy Gilmour ayaa u wareegay Norwich City oo uu xilli ciyaareedka dambe amaah ugu ciyaari doono.
RASMI: Juan Mata ayaa Manchester United u saxeexay heshiis cusub oo sannad ah, iyadoo qandaraaskiisii horena uu dhamaaday. Mata ayaa sii joogi doona Old Trafford 12 bilood oo kale.
RASMI: Leeds United ayaa heshiis cusub oo saddex sannadood ah ka saxeexday laacibkeeda Stuart Dallas. Waa heshiiskii labaad ee ay Leeds ku dhawaaqdo maanta, waxaana sidan oo kale qalinka ugu duugay heshiis rasmi ah Harrison oo amaahdii ay kaga soo qaateen Man City ay u beddeleen heshiis rasmi ah.
HESHIIS DHAN: Arsenal ayaa la filayaa in saacado gudahood ay ku dhawaaqdo saxeexa Nuno Tavares oo ay kala soo wareegayso Benfica. Gunners ayaa laacibkan ka bixinaysa 8 milyan oo Euro oo lagu daray lacago kale oo ku xidhan bandhiggiisa. Waxa uu saxeexi doonaa heshiis soconaya illaa 2026.
AC Milan ayaa dalab ka gudbisay xiddiga reer Colombia ee James Rodriguez oo Real Madrid ka tirsan laakiin dibed joog ah, si uu ugu buuxiyo booskii uu banneeyey Hakan Calhanoglu oo si bilaash ah ugaga wareegay Inter. Dalabkan ayaa ah 10 milyan oo Euro oo ay u shubayso Madrid iyo lix milyan oo mushahar ahaan ay u siinayso laacibkan. (Marca)
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa u dhaqaaqaysa xiddiga Talyaaniga ah ee Nicolo Barella oo khadka dhexe uga ciyaara Inter Milan, kana mid ah tiirarka xulka dalkiisa ee ka qayb-gelaya tartanka qaramada Yurub. Wargeyska Calciomercato ayaa sheegay in Liverpool ay doonayso in Barella u buuxiyo booskii Gini Wijnaldum, hase yeeshee aanay Inter doonayn inay iibiso. (Calciomercato)